Warshadda iyo Warshadda Shiinaha Tire-hayaha Sare ee RM-DF15 | AOLGA
• Nooca caanka ah ee DC mootada leh xawli sare iyo xawaare sare oo keenaya xawaaraha socodka 6cm ≧ 11m/s iyo awoodda wax -qarxinta> 12L/s si dhakhso ah u engegan
• Qalabka ilaalinta kulaylka oo ka dhigaya qalajiyaha timaha si otomaatig ah u damiya markay kululaato, sidaas darteed waxay ku siinaysaa waayo -aragnimo isticmaale oo aamin ah oo taxaddar la'aan ah
• 2 ikhtiyaar oo xawaaraha dabaysha ah iyo 3 ikhtiyaar oo la kontoroolo heerkulka
• Calaamadaha caanka ah ee ku dhex jira heerkulbeegga oo tayo sare leh wuxuu leeyahay xakamaynta heerkulka saxda ah iyo daryeelka timaha ee heerkulka joogtada ah
• Naqshadeynta la hagaajiyay ee bogagga fanaaniinta iyo marinnada hawada, si wax -ku -ool ah u carrab la 'iyo raaxo in la isticmaalo
• Gacan caato ah oo raaxo leh, fududahay in la isticmaalo oo la kaydiyo
• ku qalabeysan ilaalin kuleyl oo bimetallic ah, oo ka hortagaya shaqo waqti dheer ah oo waxyeello u geysata timaha qalajiyaha ama sababa khataraha badbaadada, taas oo ka badbaado badan oo la hubo.
DC Motor tayo sare leh
• Timaha qalajiyaha leh Mootada DC oo tayo sare leh ayaa socon karta muddo dheer taas oo ka dhigaysa inay u qalmaan qiimaha. Buuq yar, sii dheer, xasilloon, oo siiya hawo awood leh oo dheeri ah.
Dejinta Badan & Badbaadinta Tamarta
• Iyada oo leh 2 xawaare iyo 3 kulayl, qallajiyayaasheena is haysta waa kuwo aad u dabacsan oo tamar ku filan, sidaa darteed waxaad dooran kartaa hadba sida loogu baahdo. Intaa waxaa dheer, beddelidda hababka kulul iyo qabow ayaa kaa caawin kara inaad abuurto qaabka timaha ugu habboon.
Ilaalinta badbaadada kuleylka ee matoorka kulul
• Marka heerkulka mootadu aad u kululaado, si otomaatig ah ayuu u gooyaa korontada, wuxuuna diidaa heerkulka sare. Marka lagu rakibo qaboojinta heerkul nabdoon, waxaa jiri doona xirmo otomaatig ah oo xiriir ah iyo ku noqoshada xaalad shaqo oo caadi ah, taasoo xaqiijinaysa badbaadada adiga iyo qoyskaaga.
Ilaalinta Heerkulka Joogtada ah
• Timo-jaraha wuxuu qaataa siligga kuleylka ee U-qaabeeya si uu si siman ugu qaybiyo kulaylka, wuxuu joogteeyaa heerkulka. Waxayna si dhaqso ah u qalajisaa timaha iyadoo laga ilaalinayo kuleylka inuu waxyeeleeyo timaha.
• Qalabka qalajiyaha timaha oo leh kuleyl aad u sarreeya iyo ka -hortagga fiinka birlabka oo hooseeya, qaabeynta fiyuusku wuxuu bixiyaa ka -ilaalin kuleylka xagga qalajiyaha hoose. Qaab dhismeedka mawjadaha magnetic -ka ee hooseeya wuxuu badbaadiyaa tamarta, wuxuu yareeyaa shucaaca duurka elektromagnetic ka badan timo qallajiye la mid ah.
Ssuuqyada iyo isticmaalka la qaadan karo; Gawaarida DC oo leh xawaare sare iyo xawaare sare; 6cm ≧ 11m/s xawaaraha socodka hawada; 12L/s awoodda wax -qarxinta ee qallajinta degdegga ah;Oilaalinta kuleylka si otomaatig ah u damiso; 2 fursadaha xawaaraha dabaysha; 3 ikhtiyaarrada heerkulka la kontoroolo;Odaryeelka anion ptional
Ikhtiyaariyada Ikhtiyaarka ah
360 aaladda tuyere magnetic ironing; Daryeelka anion
Hore: Qalajiyaha Timaha ee Xawaaraha Sare RM-DF11
Xiga: BLDC Motor Timaha qalajiyaha RM-DF06
Afuufa qalajiyaha oo si dhaqso ah u engejiya timaha
Timaha qalajiyaha ee Fasalka Ganacsiga
Naqshadeeyaha Timaha qalajiyaha
Qalajiyaha Timaha Qalajiyaha Degdegga ah ee Timaha Dhumucsan
Qalajiyaha ugu Dhaqsaha Badan ee Timaha Dhumucsan
Timaha qalajiyaha ugu dhaqsaha badan ee timaha qaro weyn leh
Timo -qallajiye Salon Xirfadle
Timaha qalajiyaha oo si dhaqso ah u qallajiya timaha
Timo Qallajiyeyaasha Timaha Salon
Xirfadlaha Timaha qalajiya ee Bonnet
Timaha qalajiyaha leh ee Xirfadeed
Qalajiyaha Timaha ee La Qaadan Karo ee Xirfadeed
Xirfadle Awood Leh Timaha Korantada Qallajiye
Qalajiyaha Timaha ee Xirfadlaha ah
Qalajiyaha Timaha Qalalan ee Degdegga ah
Qalajiyaha Timaha ee Salon Tayo leh
Qalajiyaha Timaha ee Hotel Yar
Turbo Power 1800 Timaha qalajiyaha
Qalajiyaha Timaha Cad
Timaha Timaha ee Darbiga Lagu Daray ...
Qalajiyaha Timaha Xawaaraha Sare ...
Hoteelka Darbiga Lagu Dhajiyay ...